“Itoobiya Waxay Gashay Dagaal Sokeeye” Abiy Axmed. | Hargeysa World~Herald
“Itoobiya Waxay Gashay Dagaal Sokeeye” Abiy Axmed.
Uncategorized"Itoobiya Waxay Gashay Dagaal Sokeeye" Abiy Axmed.
Abiy Axmed ayaa ugu baaqay shacabka Itoobiya in ay ka falceliyaan oo ay ka dhiidhiyaan sheekooyinka gurracan.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa qoraal uu mar dhowayd soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay in Itoobiya ay gashay dagaal sheeko casri ah.
Raysal-wasaare Abiy Axmed ayaa yidhi:- “Shacabka wadankaygow yaynaan hilmaamin in kuwa fog iyo ka dhow ee aan doonaynnin wanaagga dalkeenna ay hantidooda iyo dhaqaalahooda u adeegsanayaan dagaal ay dalkeena ku soo qaadaan, Qof kasta oo Itoobiyaan ah waxa uu door ku leeyahay in uu wax ka beddelo fikradda qaldan, Waxa aynnu samayn doonnaa taariikhdeenna midnimo qaran oo noqota mid qoran!”